Umbono: Ukukhusela, ukusebenzisana kunye nokuhamba komsebenzi | Martech Zone
Umbono: Ukukhusela, ukusebenzisana kunye nokuhamba komsebenzi
Kutshanje, ndifumene i-imeyile enekhonkco phezulu eyathi abantu bayila i-imeyile entsha kwaye bafuna impendulo yethu. Ndicofa kwikhonkco kwaye yayiyeyasesidlangalaleni efikelelekayo esidlangalaleni yoyilo olutsha lwe-imeyile yinkampani. Njengoko bendikroba iphepha, bekukho iindawo ezinendawo eneendawo (izangqa ezibomvu) ezinokucofa kwaye ingxelo ethe ngqo yanikezelwa ngabantu abatyelele iphepha.
Ndicofe indawo enye apho bendicinga ukuba kunokubakho ukuphuculwa, kwaye incoko yandivulela ukuba ndingenise ingxelo yam emva koko yacela igama lam nedilesi ye-imeyile. Ujongano lomsebenzisi alufunanga myalelo - bendisazi ngokufanelekileyo ukuba ndingenza ntoni.
Iqonga lalilungile kangangokuba kwafuneka ndindwendwele iphepha lasekhaya, Umbono. Ungazama iqonga leprojekthi ye-1 ngaphandle kwendleko kwaye emva koko iiprojekthi ezifuna umrhumo ofikelelekayo wenyanga. Zonke izicwangciso zazo zibandakanya ukubethela kwe-SSL encinci ye-SSL kunye ne-backups zemihla ngemihla.
Umbono ivumela abasebenzisi ukuba balayishe uyilo lwabo kwaye bongeze iindawo ezinobushushu ukuguqula izikrini ezimileyo zibe ziinkqubo ezinokucofa, ezisebenzisanayo ezizalisekise izijekulo, utshintsho, kunye noopopayi. Iimpawu zibandakanya ulawulo lwenguqulo, ulawulo lweprojekthi kunye nokuprinta kokubini kwiwebhu, iselfowuni kunye nethebhulethi, ukubanakho ukubonisa nokwabelana zoyilo, kunye nokucofa kunye nesixhobo sokubeka izimvo ukuqokelela ingxelo yoyilo.
tags: Intsebenziswanouyilo lwentsebenziswanoukumenywausetyenziso lwesiceloyokukhuselakuyilo webUlawulo lweprojekthi yewebhuUkuhamba komsebenzi
Ngaba iiNtengiso zeVidiyo yakho ziyabonwa?
Imeko yangoku ye-B2B yokuZenzekelayo yeNtengiso